I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Zach
U-95% wezivakashi zakamuva unikeze u-Zach izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Leli fulethi elithokomele lisanda kulungiswa. Inomoya ophakathi nendawo kanye nemishini emisha kanye nombhede omusha we-memory foam. Uzobe uhlala eduze nendawo ephakathi nendawo kanye namabhulokhi nje kude nenxanxathela yezitolo yasendaweni kanye nezindawo zokudlela eziningana namabha. Futhi ukuhambo olufushane nje lwemizuzu emi-5 ukusuka ekhempasi yase-Indiana State. Uzophinda ube nezindawo zokupaka ezingaphandle komgwaqo ngemuva, izinkinobho zikagesi ukuze ulungele ukuzihlola, kanye ne-Wi-Fi ukuze wenze ukuhlala kwakho kube lula ngangokunokwenzeka!
Uzobe uhlanganyela indlu eyodwa nezinye izakhamuzi ezimbili (ungakhathazeki, zithulile futhi zinobungane!) Nguwena kuphela ozokwazi ukungena efulethini lakho, okuhlanganisa nelakho igumbi lokulala langasese, ishawa, nekhishi. Kukhona indawo yokupaka eyabiwe ngemuva.
Esinye sezici ezinhle kakhulu ngale ndlu ukuthi ibe lula. Itholakala eduze kakhulu ne-Interstate 70 kanye no-Highway 41, okwenza ukuhamba kube lula! Ungaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo lezindawo zokudlela eziningi kanye nezindawo zokuthenga kanye nepaki. Ngenkathi uqhubeka kancane, usasondele kakhulu endaweni yekolishi kanye nesifunda sedolobha.
Sihlala endaweni futhi singalungisa noma yiziphi izinkinga ngokushesha. Siyazama ukuzibamba, nokho, ukuze ukhululeke ngendlela ofuna ngayo. Uma sekushiwo, sizophendula noma yiziphi izingcingo noma imibhalo ngokushesha futhi singakujabulela ukukusiza ekwenzeni ukuhlala kwakho kujabulise ngangokunokwenzeka!
Sihlala endaweni futhi singalungisa noma yiziphi izinkinga ngokushesha. Siyazama ukuzibamba, nokho, ukuze ukhululeke ngendlela ofuna ngayo. Uma sekushiwo, sizophendula noma yiziphi…